Waxaan si tallaabo tallaabo ah kuugu soo bandhigayaa qalabka ugu AWOODDA badan ee bilaashka ah si loo cabbiro loona hagaajiyo faa'iidada mareegahaaga. Iska jir, shaqo ayaa jirta!
Maxaad ugu tababbaraysaa Google Analytics?
Qiyaas waxa dhici doona haddii aad si sax ah u qiyaasi karto inta maalgashi ee isgaarsiinta websaydhka ahi ku helayaan?
Haddii aad ku garan kartid 10 ilbidhiqsi boggee ka mid ah boggaaga ayaa kuwa ugu badan ka codsanaya macaamiishaada mustaqbalka, iyo kuwee baa ka cabsi gelinaya?
Haddii aad dib ugu noqon karto safarka macaamiishaada boggaaga, si aad u fahamto waxyaabaha ay filayaan, bareegyadooda?
Waxaas oo dhami waxay ku jiraan farahaaga (+ farabadan waxyaabo kale). Adiga ayaa kala dooranaya 2 xal:
Bixi la-taliyaha Analytics si uu shaqadan adiga kuugu sameeyo. Haddii boorsadaadu si fiican u buuxsan tahay, u kac xalkan (waxaan hore u maqlay taaha gargaarka taleefanka ee rajada markaan ku dhawaaqay heerka € 400 maalintiiba si aan u daryeelo iyaga).
Gacmahaaga wasakh ka noqo oo ku soo biir tababarkayga Falanqaynta Video-ga (ama tababbarka qof kale eh? Waan ku jeclahay si kasta)
Soo ogow Google Analytics oo u isticmaal si wax ku ool ah Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Ku noolaanshaha Faransiiska - B1
horeSocdaalka bilowga: Faham wax walba oo ku saabsan bilowga 3 saacadood
socdaMashiinka Ganacsiga ee Ganacsi ee Bilowga
Warshada Gargaarka Caalamiga ah
U beddelo goobtooda shaqo ama hawlahooda naafanimadooda
Sida Loogu Iibiyo YouTube Adigoon Muujin Wajigaaga